Ukuhlamba okuluhlaza: yintoni, iimpawu, indlela yokuyiqonda kunye nokunye okuninzi | Ukuhlaziywa okuluhlaza
IsiJamani sasePortillo | 08/07/2021 12:00 | Yendalo
Zonke iinkampani ezixhase umgaqo-nkqubo wazo ngokuthengisa iimveliso kunye neenkonzo ezisekwe kubomi bokuzenzela bezingasoloko ziza kudlala ngokulingeneyo ngeendlela zazo zokuthengisa. Gcina ukhumbula ukuba ukuthengisa kuneendlela ezahlukeneyo ezinenjongo eyodwa kukuthengisa iimveliso. Inkqubo ye- greenwashing kuthetha ukuhlanjwa okuluhlaza kwefom kwaye kubhekisa kwizenzo ezimbi ezenziwa zezinye iinkampani xa zisenza imveliso yazo. Le mveliso ihlala ibonakaliswa njengonobungqongileyo kwindalo esingqongileyo, nangona ingenjalo.
Ke ngoko, kweli nqaku siza kukuxelela indlela iGreenwashing esebenza ngayo, kufuneka uyiqonde njani kunye neempawu zayo.
1 Isebenza njani iGreenwashing
2 Uthintelo kunye nokwamkelwa
3 Iindlela zokuchonga ukuhlamba okuGreen
Isebenza njani iGreenwashing
Ayizizo zonke iinkampani ezisebenzisa imigaqo-nkqubo yokuziphatha kunye neyokuziphatha esemthethweni. Eyona njongo iphambili kukuthengisa kunye nokwenza inzuzo enkulu yemali. Uninzi lweenkampani zisebenzisa iindlela zokuthengisa eziluhlaza apho zisithengisela khona umbono wemveliso xa Imveliso ayithobeli okuboniswe kuthi. Luhlobo lwento yokwenza umntu obukeleyo okanye umntu onokubanika abathengi ukuba anike umbono wobuxoki malunga nento engayihloniphi kangako imeko-bume.
Kufana nokuvela kwengcinga yesiko emhlophe yokugcoba imifanekiso apho amaxabiso athile enkcubeko amaziko okanye amaziko angena khona apho iimeko ezininzi zingenalo naluphi na uhlobo lweenqobo ezisesikweni zokuziphatha kwaye zizame nje ukucoca umfanekiso wazo ukuze zingalahleki okanye phinda ufumane abathengi.
Kunokuthiwa nguGreenwashing Kuqondwa njengokungeniswa koluntu kwimpazamo okanye umbono ohlukileyo wemveliso, Ukugxininisa iziqinisekiso zokusingqongileyo zenkampani, umntu okanye imveliso xa zingabalulekanga okanye zingenasihlahla. Ukubeka nje, iinkampani zisebenzisa ithuba lokuziphatha gwenxa kwabantu abenza ukusetyenziswa okuthembekileyo ekubhekiseleni kwiinkonzo nakwiimveliso ezithile. Ezi zalathiso zizama ukomeleza isimilo kunye nokuziphatha okuphela kuphuhliso lokuziphatha okuchaphazeleka kumgaqo wentlalo. Ngokwesiqhelo la maxabiso asekwe kuzinzo kunye nokukhuselwa kwendalo.
Uthintelo kunye nokwamkelwa
Kwiinzame zokuthintela ukuhlanjwa okuGreenwashing, kwenziwa iinzame zokulumkisa abathengi kunye neenkampani malunga neendlela ezahlukeneyo zokuthengisa ezenziwayo. Siza kubona ezinye zeendlela ezenza ngazo ezinye iinkampani ukwenza iGreenwashing:
Basebenzisa ulwimi olungamampunge: zihlala ziyimigaqo okanye amagama angenayo inkcazo ecacileyo. Umzekelo, kwiilebhile ezininzi sifumana ibinzana elithi "abahlobo bommandla". Ngokwenene oku akunasiseko, kuba awungekhe ube ngumhlobo wendalo.
Izinto ekuthiwa ziluhlaza ezisetyenziswa kakhulu kwicandelo lokucoca izithambiso. Ezi ziinkampani ezibonelela ngemveliso ezicoceka ngokugqibeleleyo ngemibala eluhlaza kunye nemifanekiso yendalo kunye nokutsha. Nangona kunjalo, ngexesha lokuveliswa nokusetyenziswa kwezi mveliso, amanzi emilambo ekufutshane angcoliswe kakhulu. Kwimeko yezithambiso, inika umfanekiso wempilo egqibeleleyo, ngelixa ukuvelisa ezi mveliso, izixa ezikhulu zamachiza ziyafuneka ezingcolisa indalo.
Imifanekiso engamanyala: sihlala sifumana ezinye ezibhalwe ngemifanekiso yeenqwelo moya ezishiya umzila weentyatyambo emoyeni. Kuyacaca ukuba inkwenkwezi ingcoliseko kwaye bazama ukuyifihla ngeentyatyambo ezisemoyeni.
Imiyalezo engasebenziyo: Sihlala sifumana uninzi lweempawu zendalo kwizinto ezininzi apho zingenalo naluphi na uhlobo lokufaneleka.
Ukudibanisa neyona nto ibalaseleyo kudidi lwayo: Esi sisitshixo. I-brand okanye inkampani ihlala ibhengezwa njengolugcinekayo okanye eluhlaza ngakumbi kunabanye ngokwembono yayo. Umzekelo, iingxelo ezininzi zonyaka kwiinkampani zihlala zichaza ukuba zizinzileyo okanye zingcolise ngaphantsi kwezinye iinkampani.
Kukho oko hlalutya imveliso xa iyonkeUmzekelo ocacileyo zizityalo zenyukliya ezikhuthazwa njengongcoliseko olusezantsi, xa zisebenzisa umngcipheko omkhulu kunye nongcoliseko lwezibaso ukufumana amandla. Elinye ityala licuba. Bazama ukubenza babonakale njengemveliso ye-organic evela kumhlaba ngokwawo kwaye basebenzise umbala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye neepakethe ukuyenza ibonakale isempilweni.
Iindlela zokuchonga ukuhlamba okuGreen
Kwiimpawu ezininzi zemveliso bathanda ukusebenzisa ulwimi oluxakayo olubandakanya amagama okanye amabinzana abhekisa kwinzuzo ezinzileyo kunye nokusingqongileyo. Ezi lwimi zihlala zidida kangangokuba ziingcali zeshishini kuphela ezinokuziqonda. Iinkampani ezinkulu zinokuba namacandelo okanye inkampani encinci ehlangabezana nemigangatho yokusingqongileyo kunye nozinzo.
Basebenzisa amabango ngaphandle kobungqina besayensi obuxhaswe yimibutho esemthethweni. Amabinzana afana nokuthi "inokuba yeyona mveliso intle" anokuqinisekiswa ukuba ". La mabinzana azama ukunqanda yonke imifanekiso yeendawo ezingcolisekileyo edla ngokunxulunyaniswa nazo. Unxibelelwano olubonakalayo yeyona ndlela ilula yokuchonga ukuhlamba okuGreen. Ezi zezinye zezindululo zokuchonga ezi ntlobo zezicwangciso.
Siza kubona eminye yemizekelo yeklasikhi yokuHlanjwa kweGreen. Ii-yogurt zangokwemvelo kwafuneka zitshintshe igama, nangona kusekho abantu abaninzi abanengqondo yokuba imveliso isempilweni. Esi sesinye seendlela zokuthengisa eziluhlaza ukukhohlisa iingqondo zethu. Olunye ulwamkelo oluGreenwashing nguMcDonalds. Yinkampani etyholwa ngokuqhubeka nokwenza izinto ezingalunganga kwaye kunxibelelwano bazama ukuthengisa ukuba izinto zabo ezingafunekiyo zifunyanwa kwimithombo ethe gqolo ngokuzinzileyo. Ukongeza, bazama ukupeyinta uninzi lweevenkile zokutyela ziluhlaza kwaye bashiye bucala umbala obomvu wakudala obusoloko ubaphawula.
Omnye umzekelo yile ye-bioplastics ezama ukwenza ukuba umntu acinge ukuba iibhotile zenziwe ngezinto eziphilayo. Ngokwenyani azinjalo. Ukuqukumbela, kunokuthiwa iinkampani zizama ukwenza uhlamba oluhlaza zisebenzisa iqhinga lokulondolozwa kwendalo ukukhohlisa uluntu ukuba lukholelwe ukuba luya kuthenga iimveliso ezizinzileyo. Ngokwenyani umntu akayeki ukusothusa kwaye yonke le meko kufuneka ichithwe.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nokuba yintoni i-Greenwashing, indlela yokuyiqonda kunye neempawu zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Ukuhlamba okuluhlaza: Yintoni le kwaye uyiqonde njani?
Inkqubo yendalo yomhlaba